AHDR waxay raadisaa Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada -Taariikhda Waxbarashada (Cyprus) - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
AHDR waxay raadisaa Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada -Taariikhda Waxbarashada (Cyprus)
Furitaanka shaqada: Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada - Taariikhda Waxbarashada (boos-buuxa)
Ururka: Ururka Wadahadalka Taariikhda iyo Cilmi-baarista (AHDR)
Xilliga kama dambaysta ee codsiga Codsadayaasha daneynaya waxay u baahan yihiin inay soo gudbiyaan CV-gooda iyo dukumeenti la xiriira oo ay la socdaan a Warqad Xiiso leh oo uu qoray 10 November 2021.
The Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) waa bulsho badan oo gaar ah, aan faa'iido doon ahayn, urur aan dawli ahayn oo lagu aasaasay Nicosia 2003. AHDR waxay saadaalisay bulsho halkaas oo wadahadal ku saabsan arrimaha taariikhda, taariikh-qorista iyo barista taariikhda iyo Barashada waxa loo tixgaliyaa in ay tahay hab lagu horumariyo fahamka iyo fikirka muhiimka ah waxaana lagu soo dhaweeyaa qayb muhiim ah oo ka mid ah dimuqraadiyadda iyo dhaqanka nabadda. Si loo dhammeeyo tan, AHDR waxay siisaa fursad waxbarasho oo loogu talagalay shakhsiyaadka awood kasta iyo isir kasta, diin, dhaqan, iyo asal bulsho, oo ku salaysan ixtiraamka kala duwanaanshaha iyo wada-hadalka fikradaha. Tan iyo markii la aasaasay, AHDR waxay ballaarisay himiladeeda iyada oo kor u qaadaysa waxbarashada nabadda ee goobaha rasmiga ah iyo kuwa aan tooska ahayn waxayna hadda isu keentaa carruurta dugsiyada, dhalinyarada iyo macallimiinta dhammaan beelaha jasiiradda; Xaaladdan oo kale, AHDR waxay ammaan ka heshay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah doorka ay ku leedahay horumarinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya jiilalka mustaqbalka ee Qubrus.
Asal ahaan shaqada AHDR ee Waxbarashada Taariikhda: Hadafka AHDR waa in la difaaco oo kor loo qaado wada-hadallo wax-soo-saar leh iyo cilmi-baaris lagu sameeyo barista taariikhda iyo, si loo xoojiyo nabadda, xasilloonida iyo dimuqraadiyadda. Habkan, aragtida badan iyo fikirka muhiimka ah ayaa ka dhigaya labada qaybood ee ugu muhiimsan shaqada AHDR. Qaab-dhismeedkan, shaqada AHDR ee Waxbarashada Taariikhda waxay diiradda saartaa Cilmi-baarista iyo Tababarka. Tan iyo markii la aasaasay, dadaalka AHDR wuxuu diiradda saaray siinta fursadaha barayaasha, taariikhyahannada, ardayda iyo cilmi-baarayaasha si ay u noqdaan kuwo si fiican ugu qalabaysan si ay u maareeyaan kakan ee baridda taariikhda ee colaadaha iyo deegaanka colaadaha ka dib. Xaaladdan oo kale, taariikhdeena iyo taariikhdeena waxqabadyada waxbarashadu waxay diiradda saaraan:
Aqoon-is-weydaarsiyo tababarro laba-wadaag iyo mid-wadaag ah oo la xiriira Taariikhda Qubrus, Taariikhda Bulshada iyo Dhaqanka, iyo Habka Waxbarashada Taariikhda;
Soo saarista agab waxbarasho oo dheeri ah, iyo tababaro la xidhiidha;
Naqshadeynta iyo hirgelinta hawlaha cilmi-baarista iyo faafinta natiijooyinka cilmi-baarista;
Abaabulka shirarka, doodaha iyo dood-cilmiyeedka;
Horumarinta talooyinka siyaasadda;
Abaabulka bandhigyada la xiriira Taariikhda iyo Waxbarashada Taariikhda;
Abaabulka socodka magaalada iyo tamashlaha baaskiilka;
Isku xirka daneeyayaasha maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee dhinaca waxbarashada taariikhda;
Olole iyo u doodid.
Si loo taageero shaqadeeda, AHDR waxay u baahan tahay adeegyada wakhti buuxa ah Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada waayo-aragnimo la soo bandhigay oo duurka ku ah Waxbarashada Taariikhda si ay gacan uga geystaan ​​fulinta baahida mashruuca waxbarasho ee hadda iyo mustaqbalka ee Ururka.
Shuruudaha & Kartida Looga Baahan Yahay ee Sarkaalka Mashruuca Waxbarashada
Shahaadada Masterka ee maadooyinka laxiriira ugu yaraan 3 sano oo waayo-aragnimo ah ama;
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee culuumta ku habboon oo leh ugu yaraan 5 sano oo waayo-aragnimo ah.
Khibrad la taaban karo iyo farsamo ee dhinacyada khuseeya;
Khibrad u leh naqshadaynta (qorista soo jeedinta) iyo hirgelinta mashaariicda waxbarashada iyo/ama cilmi-baarista;
Xirfado cilmi-baaris iyo falanqayn heer sare ah;
Khibrad u leh lacag ururinta iyo u ololaynta waxbarashada;
Khibrad u leh wacyigelinta iyo isgaarsiinta;
Awoodda luqadaha badan;
Aqoon heer sare ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Qubrus iyo caqabadaha la xiriira;
Awood u lahaanshaha in si firfircoon loo raadiyo si loo hagaajiyo ama loo bixiyo doorashooyin hal abuur leh si loo xalliyo dhibaatooyinka;
Xirfado isdhexgal oo heer sare ah oo leh karti ay ugu shaqeeyaan koox ahaan;
Awoodda bixinta taageerada maamulka iyo saadka ee mashaariicda waxbarashada;
Awoodda la muujiyay ee la qabsiga qorshayaasha, kala hormarinta iyo ku bixinta hawlaha wakhtiga loogu talagalay;
Xirfado kombuyuutar oo heer sare ah, gaar ahaan amar aad u wanaagsan oo MS Office ah;
Fasiixnimada waxaa looga baahan yahay Ingiriis qoran iyo ku hadal;
Aqoonta Turkiga iyo/ama Giriigga waxa loo tixgalin doonaa wax lagu daray.
Qiimaynta & Xulashada Codsiyada
Codsadayaasha waxaa lagu dooran doonaa si waafaqsan shahaadooyinkooda iyo heerka la soo bandhigay ee khibradooda. Guddiga qiimeynta ayaa dib u eegi doona muujinta danaha/codsiyada la helay waxayna soo xulan doonaan musharaxiinta guuleysta ee lagu casuumi doono wareysiga. Kaliya musharaxiinta liiska ku jira ayaa lala xiriiri doonaa.
Codsadayaasha daneynaya waxay u baahan yihiin inay ku soo gudbiyaan CV-gooda iyo dukumeenti la xiriira oo ay la socdaan Warqad Xiisaha oo iimayl ah [emailka waa la ilaaliyay] by 10 November 2021.
Ololaha Shine Africa ayaa bilaabay: beeritaanka geedaha Moringa iyo kor u qaadista wacyiga waxbarashada nabadda
Barayaasha Griiga Qubrus iyo Qubrus Qubrus waxay kahadlaan dhismaha nabada
August 1, 2019 Warbixinnada Waxqabadka 0
Greek Cypriot iyo turkiga Cyprus iyo turkishka barayaasha iyo u dhaqdhaqaaqayaashu waxay wadaageen dadaalkooda si loo dhiso nabada Qubrus iyadoo la eegayo kulan furan oo maalinle ah oo ka dhacaya 43rd Machadka Caalamiga ah ee Nabada Waxbarashada kaas oo ka dhacay aaga Nicosia buffer a July 25, 2019. [sii wad akhriska…]
Daahfurka Barnaamijka Waxbarashada 'Bal qiyaas' (Qubrus)
December 9, 2017 Warar & Muuqaal 0
'Bal qiyaas' wuxuu wax ka qabtaa dugsiyada hoose, dugsiyada sare iyo hal-abuurka ujeeddooyinka ayaa ah inuu isu keeno 2500 arday oo ka socda 50 Turkish Cypriot iyo 50 Greek Cypriot oo ka kala socda dhammaan aagagga Qubrus. [sii wad akhriska…]
Ururada aan dawliga ahayn ee fadhigiisu yahay Qubrus ee Wadahadalka Taariikhda iyo Cilmi baarista ayaa loo magacaabay ku guuleystaha 2016 Max van der Stoel Award
November 9, 2016 Warar & Muuqaal 0
Wasiirka Arimaha Dibada ee Holland, Bert Koenders, wuxuu gudoonsiiyay Ururka Wadahadalka Taariikhda iyo Cilmibaarista (AHDR), oo ah hay'ad aan dowli ahayn oo fadhigeedu yahay Qubrus, iyadoo la siiyay abaalmarinta Max van der Stoel Award 2016 shaqadeeda barashada taariikhda oo ah aalad dib uheshiisiin ah Qubrus. [sii wad akhriska…]